Weriye Yassin Juma oo ah saxafi caan ah oo u dhashay Kenya oo dhowr maalmood ku xeran Itoobiya – Radio Damal
Weriye Yassin Juma ayaa la xeray xilli uu kamid ahaa saxafiyiin warar kasoo tebinayay dibad-bax weyn oo ka dhacay gudaha Gobolka Oromia ee dalka Itoobiya. Mudahaaradayaasha ayaa ka careysnaa dilkii Fannaankii Hachalu Hundessa.
Hachalu ayaa ahaa xubin sidoo kale kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qowmiyadda Oromada waxaa la toogtay xilli uu gaarigiisa ku dhex watay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa maalintii Isniinta 29, June.Rabshada dhashay dilkiisa kadib ayaa waxaa ku dhintay 80 ruux.
Juma intii uu ka shaqeynayay NTV-kenya waxaa lagu xusuustaa wararkii uu ka sameynay jiray Jabhadda OLF “Oromo Liberation Front”. Sanadkii 2009-kiina waxa uu kasoo diyaariyay Barnaamij Documentary ah.